Amasiko ase-Asia: Amasiko Nemikhuba yase-Asia | Izindaba Zokuhamba
UMaria Jose Roldan | | China, I-Tailandia, Ukuhamba kwe-Asia
Uma ucabanga nge-Asia, iJapane neChina kungenzeka ufike engqondweni njengamazwe aphambili, kepha iqiniso ukuthi i-Asia yakhiwe ngamazwe amaningi futhi kuyadingeka ukubazi bonke ukuze baqonde Isiko lase-Asia nokuthi zingahluka kanjani ukusuka endaweni eyodwa kuya kwenye.
Izwekazi lase-Asia lakhiwa amazwe angama-48: 41 kahle Asian futhi 7 Eurasia. Kunoma iyiphi i-encyclopedia ungathola amagama awo wonke amazwe akhona manje futhi ungabona ukuthi mangaki amazwe akha leli zwekazi, kepha angizukukhuluma nawe ngamasiko namasiko ezwe ngalinye, kepha yimi Ngizokhuluma nawe kuphela ngezinye zazo, lezo engizibheka njengamasiko angajwayelekile noma okungenani, ezidonsa ukunaka kwami ​​futhi engifuna ukukuhlanganyela nawe.
1 Isiko lase-Asia: amasiko namasiko
3 Umkhosi wezibani
4 Impi yamanzi eThailand
5 Shoes off njengoba ukukhombisa inhlonipho
6 Inombolo yomlingo yaseChina
7 Sanibonani eChina
8 Qaphela uyinki obomvu eChina
9 Ungasebenzisi isandla sobunxele e-Indonesia
10 Azikho izeluleko e-Japan
Isiko lase-Asia: amasiko namasiko
Emhlabeni wonke kunamasiko amaningi namasiko, ngoba phela, yikho okusenza sibe nomuzwa wokuthi singabomphakathi. Iqiniso ukuthi thina baseNtshonalanga singamangala kakhulu ngamasiko ase-Asia, ngoba kwezinye izinto zisenza sizizwe siqhelelene nabo, kepha kokunye bangaze basifundise nezindinganiso ebesingazazi noma ebesingafuni ukuzibona. I-Asia yizwekazi elingasenza sibone izinto ezihlekisayo kunoma yiliphi izwe lakhona. Kepha ngaphandle kokulibala, ngizokutshela ngamasiko namasiko athandwa kakhulu amasiko ase-Asia ongakuthakazelisa.
I-Kanamara Matsuri isho okuthile okufana nalokhu "Umkhosi wensimbi phallus". Kubizwa kanjalo ngoba inganekwane inokuthi idimoni elinamazinyo abukhali lalifihle ngaphakathi esithweni sowesifazane sangasese futhi phakathi nobusuku bomshado wowesifazane idimoni lathena amadoda amabili ngakho umkhandi wensimbi waklama insimbi yokuphula amazinyo kasathane. Kusuka egameni ungacabanga ukuthi umkhosi uhlobene nokuzala futhi ubanjwa njalo entwasahlobo eKawasaki (Japan). Yize izinsuku zingafani, imvamisa kuba yiSonto lokuqala ku-Ephreli. Ingqikithi eyinhloko wukuhlonishwa kwenduku, uphawu olukhona kakhulu kulo mkhosi, futhi izimali ziqoqelwa ucwaningo lokulwa nengculazi.
Umkhosi Wezibani uphawula ukuphela kwemikhosi yonyaka omusha waseChina futhi zenzeka nenyanga yokuqala egcwele yonyaka. Ubusuku obukhethekile, obunemilingo futhi obugcwele izibani ezenziwa amaShayina zigcwaliseka. Ebusuku kunezinkulungwane zamalambu nezibani ezigcwalisa izindlu nezakhiwo.
Lo mkhosi uphila ngenjabulo futhi kunemibukiso, umculo, izigubhu, imidanso, ama-acrobats ... neziqhumane. Izingane zithwala amalambu futhi imindeni ihlangana ukuzodla ilayisi futhi ibize inhlanhla nobunye bomndeni.
Impi yamanzi eThailand
Leli siko lesiko lase-Asia obizwa ngeSongkran Festival futhi kuyiholide elibaluleke kunazo zonke eThailand. USongkran unguNyaka Omusha WamaBuddha, ngokwesiko abantu babemanzisa izibalo zabo zikaBuddha futhi babakhombisa inhlonipho ngale ndlela. Ngokuhamba kwesikhathi leli siko seliguquliwe futhi selibe yimpi yamanzi phakathi kwabantu, njengoba emicimbini eminingi yalolu hlobo imvamisa kuba notshwala obuningi. Kwenzeka ku-Khao San Road eBangkok.
Shoes off njengoba ukukhombisa inhlonipho
Enye yamasiko esiko lase-Asia iqukethe akhiphe izicathulo endlini kuyinto esakazeke kulo lonke elase-Asia. Lokhu kwenziwa njengophawu lwenhlonipho noma ngenxa yokuthi phansi kumele kuhlale kuhlanzekile. Ngakho-ke uma uzovakashela umuntu wase-Asia futhi uye ekhaya lakhe, kuzobaluleka kubo ukuthi ushiye izicathulo zakho ngaphandle kwekhaya lakhe njengophawu lwenhlonipho.
Inombolo yomlingo yaseChina
Uyazi ukuthi amaShayina akholelwa enombolweni yomlingo? Yebo, kumayelana ne- inombolo 8, okuyinkolelo yamaShayina inombolo enhle kakhulu yenhlanhla ephathelene nemali nokucebisa. Imvamisa imibhangqwana efuna ukuchuma ijwayele ukushada ngomhla ziyi-8 enyangeni ngayinye, noma kungcono kakhulu uma ingo-Agasti 8. Njengokungathi lokho bekunganele, uzoba nentshisekelo yokwazi ukuthi ukufundwa kwezinkanyezi kwaseChina kwenziwa ngezimpawu eziyi-8 zezinkanyezi. Futhi banamaphuzu ayi-8 eyinhloko, njll. Ukuqondana okulula noma i-8 iyinombolo ekhethekile ngempela?
Kufanele ukwazi lokho eChina ayibingelelwa njengaseNtshonalanga, gwema ukuqabula ngoba ungacasula umuntu. Kungcono ukuxhawula ukubingelela ngenhlonipho. Le ndlela yokubingelela ingashayisana kakhulu nemikhonzo yethu enothando kubantu esibahloniphayo nalabo esisanda kuhlangana nabo.
Qaphela uyinki obomvu eChina
Uma usemhlanganweni webhizinisi futhi udinga ukuthatha amanothi noma uthumele inothi, ungalokothi ukwenze ngoyinki obomvu ngoba izithunzi zalowo mbala zisetshenziselwa iziphakamiso nezikhalazo ezinganambitheki. Ngakho-ke into engcono kakhulu ongayenza ukuba nepeni elinoyinki omnyama noma oluhlaza okwesibhakabhaka ephaketheni lakho, ngaleyo ndlela uqinisekile ukuthi ungacasuli noma ngubani onombala weyinki.
Ungasebenzisi isandla sobunxele e-Indonesia
Endabeni Indonesia ngokwesibonelo, awusoze wasebenzisa isandla sakho sobunxele ukunikela ngento komunye umuntu njengoba lesi simo sengqondo sikhombisa ukungahloniphi, noma kunjalo sebenzisa isandla sakho sokudla. Futhi okufanayo kuya ekubingeleleni noma kunoma yikuphi ukuxhumana nomunye umuntu, isandla sobunxele kungcono ukungasisebenzisi, kuzohlala kufiseleka ukuba nenkululeko yamahhala.
Azikho izeluleko e-Japan
Uma uzithola useJapan, ezweni lelanga eliphumayo ungalokothi uthinte endaweni yokudlela. Kuwumkhuba ongathandwa kahle futhi ungamcasula umuntu okuphathe kabi.
Kuthiwani nge- Isiko lase-Asia? Ngikutshele ngabanye babo abavela kwamanye amazwe abo, ngabe uyafuna ukusitshela okunye okwaziyo?
Amazwe amaningi avakashelwe e-Asia
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuhamba kwe-Asia » China » Isiko lase-Asia
I-Arsenio Guerra kusho
Imininingwane encane, kepha uma ungazi lutho, kulungile. okuthile kuyinto futhi nsuku zonke ufunda okwengeziwe
Phendula u-Arsenio Guerra
Izinhlelo zokusebenza ezi-5 eziwusizo kakhulu eholidini lakho elilandelayo lasehlobo